थोक - B2B - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
श्रेणी: थोक - B2B
ग्लोब थोक खरीद गर्नुहोस्
सम्पादकको पिक 13 सक्छ, 2021 11 सक्छ, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाई दशकौं देखि व्यवसाय मा हुन वा एक नयाँ व्यापार मालिक हो कि, यो तपाइँको टीम सदस्यहरु सफल छन् भनेर कसरी पक्का गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। जब तपाइँका कर्मचारीहरू उपकरणहरूसँग सुसज्जित छन् उनीहरूले उनीहरूको काम कुशलता र सही ढ do्गले गर्न आवश्यक छ, तपाइँ तपाइँको व्यवसाय मा वृद्धि देख्नुहुनेछ र तपाइँ सम्भवतः वफादार ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्नुहुनेछ। यहाँ केहि व्यावहारिक तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो कम्पनीका सबै विभागहरूमा सफलता प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पादकको पिक9सक्छ, 20217सक्छ, 2021 स्मिथ विल्लास	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एक COVID-१-प्रभावित संसारमा बैठकहरू र घटनाहरूको होस्टिंगले विशेष गरी योजनाकारहरू र स्थलहरूको पक्षमा महत्त्वपूर्ण समायोजनहरूको आवश्यक छ। सुरक्षित बैठक र गतिविधिहरूको लागि मापदण्ड समावेश गर्न, ठाउँहरूले केहि मुख्य क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ: स्वास्थ्य र सुरक्षा नीतिहरू, प्रविधि समाधानहरू, र सुरक्षित खाना र पेय पदार्थहरू, केहि नामहरूको लागि।
7 सक्छ, 20215सक्छ, 2021 बाइट डिजिटल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
एक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी तपाइँको सबै अनलाइन मार्केटिंग आवश्यकताहरूको ख्याल राख्छ। त्यो सामाजिक मिडिया व्यवस्थापन हो, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, रूपान्तरण दर अप्टिमाइजेसन, सामग्री मार्केटि,, प्रति-क्लिक भुक्तान वा विश्लेषकहरू। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी राम्रो छ किनकि उनीहरूले कसरी तपाईंको मार्केटिंग गर्दैछ ईगल नजर राख्न र छिटो तपाईंको लागि कुनै समायोजन गर्न सक्षम छन्। ठोस मार्केटिंग योजना, लक्ष्य र रणनीति बिना व्यवसाय केहि पनि छैन।
तपाइँको कार्यस्थलमा राम्रो स्वच्छता अभ्यास कसरी गर्ने
सम्पादकको पिक3सक्छ, 20212सक्छ, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कार्यस्थलमा राम्रो तरीका र स्वच्छता हुनु यो सँधै महत्त्वपूर्ण छ। यसले कार्यस्थलमा सबैलाई तपाईंको आदर गर्दछ, र यसले अन्य मानिसहरूलाई सर्दी र भाइरसबाट सुरक्षित राख्छ। निम्नलिखित त्यहाँ राम्रो स्वच्छता अभ्यासको लागि केहि सुझावहरू छन् जब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ:
ट्रेसब्रस टूथब्रस एक्सेसरीजको साथ ल्याउनुहोस्
यदि तपाई काममा स्वच्छ हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईले गर्न सक्ने एउटा चीज तपाईलाई सधैँ ताजा सास छ भनेर सुनिश्चित गर्नु हो। धेरै व्यक्तिले आफुलाई काममा सास फेर्ने अनुमति दिनको गल्ती गर्दछन्। तपाईं यस मुद्दाको लडाई गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंसँग यात्रा प्याक ल्याएर यस्तो हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। स्टोरहरूले साना टूथब्रशहरू, टूथपेस्ट, र माउथवश बिक्री गर्दछ प्याकेटमा जुन तपाईंसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं बाथरूममा लुकेर बस्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग मासुको खाजा खाइसके पछि नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ।
कर्मचारीहरूले कसरी सृजनात्मक स्लम्पहरू हटाउन सक्छन्
सम्पादकको पिक 1 सक्छ, 20212सक्छ, 2021 लिन्डा अर्बन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
लेखकहरूको ब्लक जस्ता मानसिक सडकहरू रचनात्मक कर्मचारीहरूका लागि सामान्य, निराशाजनक घटना हुन्। जबकि कर्मचारीहरु लाई उनीहरुको पछाडि प्रत्येक पल काल्पनिक र उत्पादक हुन को लागी अपेक्षा गर्नु हुँदैन, एक महत्वपूर्ण गिरावट एक प्रकोप मा स्नोबल गर्न सक्छन्। रचनात्मक स्लम्पहरू पार गर्न र कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको काममा व्यस्त राख्नको लागि, कर्मचारीहरू र प्रबन्धकहरूले सँगै काम गर्नु पर्दछ कामदारहरूलाई मानसिक ताजा र सहकार्य गर्न स्वतन्त्र राख्न।
स्टार्ट अपको लागि प्रभावी अफलाइन मार्केटिंग सल्लाह
सम्पादकको पिक अप्रिल 28, 2021 अप्रिल 26, 2021 शेरिल राइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सानो व्यवसायको मालिकको रूपमा तपाईलाई विभिन्न टोपी लगाउने महत्त्व थाहा छ। न केवल तपाईलाई प्रभावकारी र कुशल हुनुपर्दछ जब यो तपाईंको व्यापार बढ्दै आउँदछ, तर तपाईं पनी एक शानदार मार्केटर पनि हुनुपर्दछ। त्यहाँ तपाइँको व्यवसाय बढ्ने कुनै तरिका छैन यदि तपाइँ यसलाई कसरी राम्रोसँग मार्केट गर्ने भनेर जान्नुहुन्न भने। तपाईसँग कस्तो प्रकारको उत्पादन छ, सम्भावित ग्राहकहरु लाई तपाइँको उत्पादन बजार गर्न सक्षम हुनु कुञ्जी हो। जहाँ अनलाईन मार्केटिंग तपाईंको व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ, अफलाईन मार्केटिंग पनि आवश्यक छ।
कसरी मेशिन शिक्षा तपाईंको व्यवसाय लाई फाइदा पुग्न सक्छ
अप्रिल 25, 2021 अप्रिल 22, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाइँ सँधै चाहानुहुन्छ कि तपाइँको व्यवसाय छिटो सर्न सक्छ? यसको मतलब एक ठूलो सम्झौता बढी कुशल हुनु हो। बढी दक्ष हुनु अझ फलदायी बन्न पुग्छ। यो निस्सन्देह, एक नतीजा हो जसले तपाईंलाई अधिक लाभदायक बनाउँदछ। यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन मेशिन शिक्षाले तपाईंलाई यी परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
अप्रिल 22, 2021 अप्रिल 19, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
व्यापार को दुनिया मा, यो आफ्नो व्यापार विज्ञापन गर्न यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक ग्राहक आधार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई बिक्री उत्पादन गर्न र लक्षित दर्शकहरूसँग तपाईं पुग्न चाहानु भएको सम्पर्कहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तलका तीन सुझावहरू पत्ता लगाउनुहोस् ती तरीकाका बारे बढि जान्नका लागि जुन तपाईं विज्ञापन गरिनुपर्दछ।
मार्केटिंग रिसोर्स प्रबन्धनका फाइदाहरू बुझ्दै
अप्रिल 18, 2021 अप्रिल 19, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
प्रत्येक मार्केटिंग रणनीति या त हिट वा व्यापारको लागि मिस हुनसक्दछ। धेरै अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि केहि बजारहरूले यी सबै अभियानहरू सोचेभन्दा प्रभावकारी छैनन् भन्ने सोच्दछन्। यी मध्ये केही मार्केटिंग विशेषज्ञहरू आफ्ना परियोजनाहरूको ROI ट्र्याक राख्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यी मुद्दाहरूले अघिल्लो असफल विधिहरू परिमार्जन गर्न र आरओआई अनुकूलन गर्न यसलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउँदछ। यदि तपाईं एक व्यवसाय मालिक हो जो यस्तै दृश्यको माध्यमबाट आएका हुन सक्नुहुन्छ, हुनसक्छ यसका बारे सिक्दै मार्केटिंग स्रोत व्यवस्थापन तपाइँलाई धेरै आशाजनक परिणाम दिन सक्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 16, 2021 अप्रिल 13, 2021 फ्रान्की वालेस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
२०१ of को अन्त्यमा उद्रेक भएदेखि, कोरोनाभाइरस महामारीले हामी विश्वव्यापी रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तरिकालाई नयाँ रूप दियो। अब, खोपहरू जनसंख्याको माध्यमबाट आफ्नो बाटो बनाउँदैछन्।
अनुमानका साथ कि खोपहरू अर्थ आर्थिक सुधार हुन सक्छ २०२१ पछि / २०२० को शुरुमा, भाइरसको पूर्ण विकसित प्रभावहरू अर्थव्यवस्थामा देखिएको हुन सक्छ। खोपले यसको केही क्षतिलाई उल्ट्याउन सक्छ यसले विश्वव्यापी व्यापारमा यसको आफ्नै प्रभाव पार्न सक्छ।
किन UGC उत्तम eCommerce सामग्री मार्केटिंग उपकरण हुन सक्छ
सम्पादकको पिक अप्रिल 15, 2021 अप्रिल 13, 2021 ज्याक रोजर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
समय पछि, प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री सामग्री को सब भन्दा अधिक प्रामाणिक, वास्तविक, र भरोसायोग्य रूप को रूप मा प्रमाणित छ। यूजीसी भनेको ब्रान्डका वफादार प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सिर्जना गरिएको सामग्रीको टुक्रा हो जुन निश्चित रूपमा ब्रान्डको व्यवसायलाई अगाडि बढाउन र उनीहरूको नाफा अधिकतम गर्न सक्दछ।
इ-वाणिज्य व्यवसायहरू लगातार आफ्नो ब्रान्ड उपस्थिति बढाउनको खोजीमा छन्। सामाजिक र सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री भेला गर्न एक उत्तम प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दछ किनकि यसले अरबौं दैनिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको साथ ठूलो प्लेटफर्म हो।
अप्रिल 13, 2021 अप्रिल 10, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ठूला आर्थिक परिवर्तनहरू देखा परेका छन्, र व्यापारको दुनिया फेरि कहिलै पनि त्यस्तो हुनेछैन। कोभिड - १ p महामारीले साना र ठूला व्यवसायहरूमा दुबै सकारात्मक र नकरात्मक प्रभाव पारेको छ। यो दुनिया भर मा व्यापार को भारी बन्द को कारण छ।
तपाईं सम्भवत नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न विचारहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जबकि अवस्थित वस्तुहरू राख्दै। यदि त्यो तपाईं हुनुहुन्छ भने, तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईंको व्यवसायको सफलता सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि तल तरिकाहरू छन्।
सम्पादकको पिक अप्रिल 13, 2021 अप्रिल 12, 2021 शेरिल राइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
COVID-19 महामारीले हामीलाई कामको भविष्यलाई पुन: मूल्याval्कन गर्न र छिटो र ठूला परिवर्तनहरू गर्न मद्दत पुर्‍यायो। वर्षौंसम्म, कार्य विज्ञहरू र सोच्ने नेताहरूले भविष्यवाणी गरे कि हामी चाँडै नै प्रविधिको प्रगतिका कारण कार्य गरिरहेका छौं। भर्चुअल बैठकहरू र भिडियो कन्फरेन्सले धेरै कम्पनीहरूको लागि व्यक्तिगत बैठकहरूको ठाउँ लिएको छ, र धेरै कर्मचारीहरू पाठ वा ईमेल मार्फत आफ्ना मालिकहरूसँग जाँदैछन्। यद्यपि यो तथ्यले परिवर्तन गर्दैन कि व्यक्ति अझै पनि आफ्नो कडा परिश्रमका लागि पुरस्कृत हुन चाहन्छन् र उनीहरूले पेशेवर कम्पनीमा ल्याउने व्यावसायिक सीपहरू। यो धेरै टीम सदस्यहरू अहिले व्यक्तिमा काम गर्न सक्षम छैनन्, जबकि एक स्वस्थ पेशेवर वातावरण को पोषण गर्न चाहने रोजगारदाताहरु को लागी एक चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
अप्रिल 10, 2021 अप्रिल 8, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ अमेरिकामा 30.2०.२ मिलियन साना व्यवसाय छन्? यस्तो संख्याको साथ तपाईले धेरै मेहनत गर्नु पर्छ कि तपाईको व्यवसायले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा पाउनेछ। तपाईं राम्रो मार्केटिंग रणनीति र आश्चर्यजनक मार्केटिंग उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर यी आश्चर्यजनक मार्केटिंग उपकरणहरू के के हुन्? तल यसमा छलफल गरिएको छ:
अप्रिल 10, 2021 अप्रिल 9, 2021 ज्याक केवेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सफल थोक यात्रा ब्याग व्यवसाय चलाउन गाह्रो काम हो किनकि यो धेरै बहुमुखी उद्योग हो। यी झोलाहरू प्रयोग, सामग्री, र आकारको आधारमा धेरै प्रकारहरूमा वर्गीकृत गरिएको छ। यसको बजार आकारको रूपमा, केवल ह्यान्डब्याग उद्योगको market१..41.35 बिलियन (२०१ 2019) को बजार मूल्य थियो। यो अर्को वर्ष year% ले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। उच्च मागको कारण, झोला बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 10, 2021 अप्रिल 8, 2021 Darshit Parmar	टिप्पणी छोड्नुहोस्
शिपिंग लागत व्यवसायहरूको लागि एक अपरिहार्य र आवश्यक खर्च हो। तपाईंको शिपिंग लागत सीधा तपाईंको व्यापार लाभ मा प्रभाव पार्छ। ई-वाणिज्य उद्योगहरूमा बढेको मागको कारण, वाहकहरूले उनीहरूको दरहरू समायोजन गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया, वाहकले उनीहरूको दरहरू वार्षिक रूपमा संशोधित गर्दछ।
अनुसन्धान देखाउँदछ कि लगभग% 88% व्यक्तिहरूले नि: शुल्क शिपिंगको साथ साइटहरू छनौट गर्दछन्। अमेजन जस्ता ठूला ई-वाणिज्य कम्पनीहरूले विश्वव्यापी नि: शुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्दछ, साना व्यवसायहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँदछ किनकि उनीहरू निःशुल्क शिपिंग वहन गर्न सक्दैनन्। यसैले, शिपिंग लागत कसरी कम गर्ने सिक्ने तपाईंको व्यवसायको लागि आवश्यक छ।
अप्रिल 8, 2021 अप्रिल 7, 2021 स्टेफनी स्नाइडर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कडा कदम चाले बिना आज ग्राहकहरुबाट वफादारी आकर्षित गर्न र सम्भव छैन। सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरू वा सेवाहरूको लागि जाँच गर्दै र त्यसमा स्विच गर्न।
तसर्थ, प्रतिस्पर्धा अगाडि रहनु भनेको बहु च्यानलमा प्रस्तुत हुन रणनीतिहरू आउनु हो। यो गर्नाले तपाईंको व्यवसायलाई जबरदस्त मद्दत गर्दछ र बिक्रीलाई बढावा दिन्छ।
सम्पादकको पिक अप्रिल 7, 2021 अप्रिल 6, 2021 शेन बार्कर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
मार्केटिंग अटोमेशन उद्यमीहरु संग सबै क्रोध हो। र किन यो हुनु हुँदैन? सबै पछि, यसले बहु लाभहरू प्रदान गर्दछ। उपकरण र टेक्नोलोजीहरूले कम संसाधनहरूको साथ तिनीहरूको अपरेसन मापन गर्न व्यावसायलाई सक्षम गर्दछ। उनीहरूले समग्र उत्पादकत्व पनि बढाउँछन् र ओभरहेडहरू विस्तृत मार्जिनले घटाउँछन्। 76% उद्यमीहरूको मार्केटि auto स्वचालन प्रणाली लागू गरेको एक बर्ष भित्र प्रतिफल उत्पन्न भयो।
अप्रिल 3, 2021 अप्रिल 1, 2021 सोफिया विलियम	टिप्पणी छोड्नुहोस्
इन्स्टाग्राम अब विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लेटफर्म मध्ये एक भएको छ। कथाहरू पोष्ट गर्नदेखि तस्वीरहरू र रीलहरू पोस्ट गर्न, व्यक्तिहरूले सबै इन्स्टाग्राममा अधिक लाइक र अनुयायीहरू प्राप्त गर्न सबै गर्छन्। त्यहाँ १ अरब भन्दा बढी इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू र Instagram०० मिलियन प्रयोगकर्ताहरू दैनिक इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्दछन्। अझै, प्रयोगकर्ताहरू इन्स्टाग्राममा पर्याप्त लाइक र अनुयायीहरू प्राप्त गर्न असमर्थ छन्। अधिक अनुयायी र मनपर्दो प्राप्त गर्नका लागि एक धेरै मेहनती हुनुपर्छ। फोटो र भिडियोहरू साझेदारी गर्न पर्याप्त छैन। सामग्री अद्वितीय र आकर्षक हुनुपर्दछ यदि तपाईं अधिक अनुयायी र मनपर्दो प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने।
सम्पादकको पिक अप्रिल 3, 2021 अप्रिल 1, 2021 स्वेता शर्मा	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विकास विश्वमा एक स्थिर कारक हो। मानिसहरु, जनावरहरु, र जीवहरु को गतिशील वातावरण अनुकूल गर्न को लागी वर्षहरुमा विकसित भयो। स्कूल प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा उद्योग, र रेस्टुरेन्ट प्रवृत्ति सबै नयाँ प्रवृत्तिमा समायोजित गरिएको छ; किन व्यवसायहरु पछाडि छोड्नु पर्छ?
केहि दशकहरु को अवधि मा, व्यापार बजार को एक पूर्ण बदलाव छ। पैसा उन्मुख लक्ष्य बाट ग्राहक-ध्यान केन्द्रित अपरेशनहरू, यो सुरक्षित हो भन्न को लागी सुरक्षित हुनेछ कि यो उद्योग को उल्टो को लागी गरीएको छ। यद्यपि, उद्देश्य केहि समयका साथ परिवर्तन भएको छ। बजारहरु पहिले भन्दा अधिक समय र दक्षता मूल्यवान गर्न शुरू भयो। र ती दुवैलाई बचाउने एक मात्र तरिका स्वचालन हो।
सम्पादकको पिक अप्रिल 3, 2021 अप्रिल 1, 2021 भिक्टोरिया स्मिथ	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक अप्रिल 2, 2021 मार्च 31, 2021 नील व्हाइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ब्लाइन्ड हायरिंग समझाईयो - यो के हो र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने
मार्च 26, 2021 मार्च 23, 2021 लिसा जू	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ब्लाइन्ड हाइयरिंग एक प्रक्रिया हो जसलाई रोजगार उम्मेद्वारको व्यक्तिगत जानकारीलाई रोक्दछ जुन भाडामा लिने निर्णयलाई प्रभाव पार्न वा "पूर्वाग्रह" गर्न सक्छ। पूर्वाग्रहले धेरै तरिकामा आफैलाई प्रकट गर्न सक्छ - दुबै बेहोश र सचेत - र अनुसन्धानले भन्छ कि पूर्वाग्रह प्रारम्भिक रिजुमे-स्क्रीनिंग चरणको रूपमा चाँडो हुन सक्छ। यही कारणले नेताहरूले भाँडामा लिने प्रक्रियामा र कर्मचारी रोस्टर भर विविधता र समावेशीकरणको लागि नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका छन्।
Under अन्डररेटेड तरिकाहरू तपाइँको व्यवसाय लाई बढावा दिन!
मार्च 24, 2021 मार्च 21, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
धेरै व्यवसायहरूले भर्खरको समयमा गिरावटको अनुभव गरिरहेका छन्। चाहे यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य स crisis्कट, राजनैतिक उथलपुथल, व्यक्तिगत मुद्दाहरू, वा अरू केहि कारणले गर्दा हो, त्यहाँ कुनै पनि इन्कार गर्ने कुरा छैन। भर्खरका महिनाहरू एक समान व्यवसाय र व्यक्तिहरूको लागि चुनौतीपूर्ण भएको छ - दुनिया मा जहाँसुकै भए पनि फरक पर्दैन।
जहाँसम्म, यी कठिन समयमा पनि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् तपाईले व्यवसायलाई बढावा दिन, ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न, र बजारमा बढ्न र फस्टाउन जारी राख्न!
W तरिकाहरू PKI ले तपाईंको संगठन सुरक्षित राख्छ
मार्च 22, 2021 मार्च 22, 2021 एम्मा विल्सन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सार्वजनिक कुञ्जी पूर्वाधार (PKI) साइबर संसारको लागि आवश्यक छ। यसले डिजिटल प्रमाणपत्र र ईन्क्रिप्शनमा समर्पित प्रक्रियाहरू समावेश गर्दछ। PKI सफ्टवेयर, हार्डवेयर, र डिजिटल प्रमाणपत्र संग सम्बन्धित व्यक्ति वर्णन गर्दछ। यो कम्प्युटर सुरक्षा कम्पोनेन्टले व्यवसाय र उनीहरूका ग्राहकहरू बीच विश्वासमात्र सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्दछ। आफैलाई परिचित गर्नुहोस् कसरी PKI तपाईंको संगठनको रक्षा गर्न कार्य गर्दछ।
सम्पादकको पिक मार्च 21, 2021 अप्रिल 16, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
किन एक राम्रो श्रोता बन्ने सुरक्षा उद्योग मा महत्वपूर्ण छ
Property तरीकाहरू तपाईंको सम्पत्तीबाट थप कर्ब अपील प्राप्त गर्न